Sambany eo amin’ny tantaran’ny baolina kitra malagasy: tafita hiatrika ny “Can 2019” i Madagasikara | NewsMada
Par Taratra sur 17/10/2018
Tao anatin’ny fotoana fohy, nanakoako eran-tany ary lasa fantatr’izao tontolo izao i Madagasikara noho ny fahombiazana, azon’ny Barea de Madagascar, tafita hanao ny “Can 2019” any Kameronina. Any indray izany, manomboka izao, ny saina aman’eritreritry ny rehetra.
Tantara vaovao, pejy vaovao. Izay no hilazana ny zava-bitan’ny Barea de Madagascar eo amin’ny baolina kitra. Voalohany tao anatin’ny 58 taona nahazoan’i Madagasikara ny fahaleovantena, ary sambany teo amin’ny tantaran’ny baolina kitra, no tafita ary hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2019), tanterahina any Kameronina ny Barea de Madagascar.
Ny fandresena fanindroany azon’ny Barea de Madagascar, nanoloana ny Nzalang Nacional avy any Ginea ekoatorialy, omaly no nahazoana ny tapakila hiatrehana izany. Lavon’ny ekipam-pirenena malagasy, tamin’ny isa tokana 1 no ho 0 tetsy amin’ny kianja Vontovorona, teo amin’ny lalao miverina ho an’ny andro fahatelo, amin’ny fifanintsanana isam-bondrona mantsy ny Gineanina.
Baolina tokana, tafiditr’i Njiva Rakotoharimalala, mpilalao ao amin’ny FC Sukhothai FC Thailand, sady mpilalaon’ny Cnaps Sport rahateo, teo amin’ny minitra faha-42 taorian’ny fahaiza-manaony manokana, namitaka ireo vodilaharana gineanina telo. Tamin’ny ankapobeny, nofehezin’ny Malagasy ny fihaonana. 75 isan-jaton’ny fitazonam-baolina dia an’ny Barea de Madagascar avokoa. Nanantombo teo amin’ny isan’ny fanafihana ihany koa ny Malagasy. Niezaka nanindry ihany ny gineanina, notarihin’i Pablo, saingy nahay i Dabo, mpiandry tsatoby malagasy, nanakana ny dakan-dry Kike Seno sy i Iban Salvador. Tsara rafitra ihany koa fiarovantena malagasy, nahitana an’i Metanire sy i Bapasy ary i Ando.
Vetivety dia nalaza eran-tany
Tsy niandry ela akory fa vao vita ny lalao, omaly ihany dia efa nahoraka maneran-tany, ny lazan’i Madagasikara, tamin’ity fandresena azon’ny Barea de Madagascar ity, indrindra fa ny nahatafita ny Malagasy ho any amin’ny Can 2019. Samy namoaka izany avokoa ireo tambanjotran-tserasera samihafa.
Anisan’ny nampiely ny vaovao voalohany, ho ren’izao tontolo izao, ny Benin Web TV, ny “Radio France Internationale” (RFI), nanambara fa “ Firenena voalohany, tafakatra amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika”. Nambaran’ireo mpanao gazety frantsay, “ Nahavita fahagagana ny Barea de Madagascar, nandresy indroa miantoana an’i Ginea Ekoatorialy.”
Dingana manaraka ho an’ny Barea, ny fandraisana an’i Soudan, ny 11 novambra ho avy izao ary ny fihaonana farany, hikatrohana amin’i Senegal, hatao any Dakar, ny 18 marsa 2019. Lalao, tsy hampiova zavatra intsony, eo amin’ny fahatafitan’ny Barea de Madagascar.
-Nicolas Dupuis : Faly satria tafita amin’ny Can 2019 ny Barea de Madagascar. Nampiseho endri-dalao tsara ireo mpilalao rehetra, tao anatin’ny 90 mn nilalaovana. Nahitam-bokana izany, nahatafiditra iny baolina tokana maty iny ka nahazoana ny tapakila handehanana any Kameronina. Tsy mijanona eo fa hiezaka hitady fandresena amin’ny lalao hikatrohana amin’i Soudan sy i Sénégal mba ho voalohany, ao amin’ny sokajy misy antsika.
-Faneva Ima (Kapiteny) : Faly loatra, ny tenako satria tsy noeritreretina izany hoe : hanao Can izany ny Malagasy, saingy taorian’ireny vokatra tsara vita rehetra ireny, mendrika ho an’ny Barea ny hiatrika ny Can. Mbola mila ampitomboana ny ezaka, ho an’ireo lalao roa ambiny. Misaotra manokana ny mpanazatra tamin’ny fandavan-tenany, nanampy ny Barea ka nahazoana izao vokatra izao. Vita io Can io raha mifanohana ny Malagasy rehetra.
-Bolida : Aleo aloha isika hifaly satria sambany eo amin’ny tantaran’ny baolina kitra izany hoe tafita hiatrika ny Can 2019, izany. Misaotra ny mpanazatra, ny mpijery izay nanohana anay hatramin’ny farany, na teto an-toerana, na tany ivelany.
-Njiva : Faly satria tratra ny tanjona dia ny hahatafita amin’ny Can 2019. Teo koa moa ny nahafatesako ilay baolina, nanamafy izay fahatafitana any amin’ny Can, izay. Misaotra ny vahoaka malagasy nanohana. Na efa tafita aza ny Barea, hiezaka handresy hatrany amin’ireo lalao roa farany.